FADEEXAD: Daawo Muuqaalka Laga Qabtay Harry Maguire Goolkii Afraad Ee Leicester & Sida Uu Daawadaha U Ahaa - GOOL24.NET
FADEEXAD: Daawo Muuqaalka Laga Qabtay Harry Maguire Goolkii Afraad Ee Leicester & Sida Uu Daawadaha U Ahaa
Kooxda Manchester United ayaa shalay la kulantay guuldarradii ugu horreysay ee horyaalka tan iyo January 2020 kulamada ay martida tahay kaddib markii ay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay gegida King Power Stadium ay 4-2 kaga soo guuleysatay.
Hal xiddig oo si buuxda ugu ceeboobay kulankaas ayaa ahaa kabtanka Man United ee Harry Maguire, ugu horreynba jamaahiirta Foxes ayaa markasta oo uu kubadda taabto ku orinayay daafacoodii hore.
Maguire ayaa lagu eedayn karaa dhammaan afarta gool ee shalay ka dhashay Red Devils, 28 sano jirkaas ayaa ugu horreynba Iheanacho si fudud kaga qaatay goolka uu Youri Tielemans bar-bardhaca ugu keenay Foxes halka goolka labaad ee Soyuncu uu Offside-ka ka saaray dhamaan saddexdii xiddig ee kooxdaas goolka u hortaagnaa oo uu Soyuncu kamid ahaa.
Maguire ayaa goolka saddexaad sii daayay Jamie Vardy oo inta uu hore goolka ugu galay kaddib dib uga soo baxay isaga oo meel banaan ku helay kubadda, markale goolka afraad oo ah midka uu ceebta badan kula kulmay ayaa ah inuu sii daayay Patson Daka oo uu raacanayay.
Shaqsiga sida weyn loogu eedeeyay xulashada Maguire ayaa ah tababare Ole Gunnar Solskjaer maadaama oo uu mudo daafacaasi dhaawac ku maqnaa isla markaana uu hal maalin oo kaliya tababarka qaatay balse tababaraha Norwegian-ka ah ayaa toos shaxdiisa ugu soo celiyay walow la filayay inuu seegi doono kulanka.
Muuqaalka barta Twitter-ka haysta ayaa ah goolka afraad ee Leicester, Maguire oo aan cidna raacanayn isla markaana taagan ayuu garab marayaa Daka oo kubadda u socda isaga oo si sahlan kaga dhalinaya goolka De Gea kubadda uu meesha dhaw ku helay.